#NABSHOWNY ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $ 100: နယူးယော့ POST PRODUCTION အစည်းအဝေးခန်း, NAB SHOW NEW YORK & AES ပြပွဲ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိသည်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » အသားပေး » #NABSHOWNY ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $ 100: နယူးယော့ POST PRODUCTION အစည်းအဝေးခန်း, NAB SHOW NEW YORK & AES ပြပွဲ
အချိန်နေဆဲရိုးရှင်းစွာကုဒ် PP100 သုံးပြီးအားဖြင့်2ရက်ကြာအပြည့်အဝညီလာခံ Pass နှင့် (ကိုမှန်မှန် $ 895) ရက်နေ့မှာ $ 27 ချွတ်လက်ခံရရှိမှုအတွက်ကျန်ရစ်ရ၏။ ဤကမ်းလှမ်းချက် 9.13.2018 (yeah, ယနေ့င်) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများစုကတှငျနထေိုငျသောအခြိနျဆှဲဘို့, ဒီ $ 100.00 ကယ်တင်ပြီးကောင်းတဲ့ကင်ညစာမြို့လယ်များအတွက်ကြောင်းပိုက်ဆံအသုံးပြုရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် Go: www.nabshowny.com/conference/postproduction-conference-nyc
#NABSHOWNY 2018 အပေါ်အရပျကိုယူပြီးဖြစ်ပါသည် မှာအောက်တိုဘာလ 17th-18th Javits ရေးစင်တာက NYC ထိုသို့အရင်းအမြစ်များကိုအတူထုပ်ပိုးပါတယ်။ အထူးပစ်မှတ်ထား core ကိုအစီအစဉ်များ, ညီလာခံများနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုညီလာခံအစည်းအဝေးများတူသောအရပျ၌များစွာသောအသစ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရှိသည်: ပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကိုအတူ Premiere Pro နဲ့မီဒီယာ Composer နှင့်တန်းများအတွက် HDR ဗီဒီယို Essentials / သိကောင်းစရာများ! လေ့ကျင့်ရေးတင်ရန်မှအညွန့်နှင့်အတူပူးပေါင်းထုတ်လုပ် အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts, ရုပ်ရှင်, တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ, colorists နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင်အလယ်အလတ်-to-အဆင့်မြင့် level ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းသင်တန်းပေါ်တွင်သင်ယူတံ့သော။ ဒါ့အပြင်သိကောင်းစရာများနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားညီလာခံအတွက်တစ်နှစ်တာ၏နယူးယောက် broadcast, ဒါဝိဒ်သည် muir, ABC ရုပ်သံကမ္ဘာ့ဖလားသတင်းများယနေ့ည Anchor လက်လွတ်မပါဘူး။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Big Apple ကမှတက်ဦးဆောင်မယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ပေးအပ်ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် အဖြစ်အပျက်။ ဒီတော့ညှိနေဖို့! အဆိုပါအသံလွှင့် Beat ဗီဒီယိုကသင်္ဘောသားအားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များအဘို့အကြည့်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုကျယ်ပြန့်စုစည်းစည်းဝေးကြီးကြမ်းပြင်ကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နည်းပညာတွင်ဤတန်ဖိုးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များသင့်ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်မညျဖွစျကွောငျးသတငျးအခကျြအတှကျကြှနျုပျတို့ featured ကဗီဒီယို Vault ထွက်စစျဆေးဖို့သေချာပါစေ!
ဤတွင် 2017 ကနေတစေ့တစောင်းင် #NABSHOWNY:
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2018 ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် NAB ပြရန် LIVE ။ 2017 ခုနှစ်, NAB ပြရန် တိုက်ရိုက် 1.3 သန်းအွန်လိုင်းကြည့်ရှုကျော်နှင့် 2018 စဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိ NAB ပြရန်ကျနော်တို့ 1.5 သန်းကြည့်ရှုကျော်လွန်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး	2018-09-13
ယခင်: Sohonet စျေးသက်သာအချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဘို့ ClearView Flex ကို Go ကိုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့်နှင့်လူဦးရေကိုကင်မရာကနေ console ကိုအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအီလက်ထရောနစ်အားကစားကွင်း Arlington တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကို enable
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "#NABSHOWNY ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 0: နယူးယော့ POST PRODUCTION အစည်းအဝေးခန်း, NAB SHOW NEW YORK & AES ပြပွဲ" ။ https://www.broadcastbeat.com/nabshowny-save-100-ny-post-production-conference-nab-show-new-york-aes-exhibits/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။